बरु ज्यान जाला तर, महिलाले कहिल्लै भन्दैनन् आफ्ना यी रहस्य…. – Ramailo Sandesh
एजेन्सी – भनिन्छ, महिलाहरु रहस्यका पर्याय हुन् । प्रायः महिलाको जीवनमा कैयन रहस्य र राज हुन्छन्, तर त्यसबारे उनीहरुले कहिल्यै मुख खोल्दैनन् ।सोशल मिडियामार्फत हालै गरिएको एक सर्भेमा महिलाहरुसँग सोधिएको थियो, ‘तपाईं के कुरा हाम्रो श्रीमान वा प्रेमीसँग कहिल्यै बताउनु हुन्न ?’ रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै थाहा भयो कि, के कुरा हो त्यस्तो जुन महिलाहरुले कहिल्यै भन्दैनन् ।
लाग्ला तपाईंको जीवनसाथी वा प्रेमिकाको सबैभन्दा आनन्ददायी अनुभव तपाईंसँगै भएको हो । तर, तपाईं गलत हुन सक्नुहुन्छ । किन कि तपाईंलाई के थाहा, न उनले केही कुरा छुपाएको पो छिन् कि ! ज्यादातर महिलाहरु आफ्नो पूरानो अफेयरबारे हालको प्रेमी वा श्रीमानलाई केही कुरा बताउँदैनन् । यसकारण कि उनलाई कसैले नराम्रो नबुझुन्।दोस्रो कारण ज्यादा व्यवहारिक छ । महिलाहरु यस्तो कुरा यसकारण छुपाउँछन्, ता कि उनको हालको सम्बन्धमा कुनै दरार नआओस्, अथवा आफ्नो जीवन साथीले कुनैपनि तबरले असहज महसुस गर्न नपरोस् ।
केटी साथीहरुसँगको गन्थन
तपाईंले प्राय यो कुरा जान्न पाउनुहुन्न, तपाईंंको प्रेमिका वा जीवनसाथी आफ्ना केटी साथीहरुसँग कस्तो गफ गर्छिन् । तपाईंले लुकेर उनीहरुको गफ सुन्नुभयो भने फरक कुरा । महिलाहरु जुनकुरा पुरुषसँग शेयर गर्न सक्दैनन्, ।। साझापोस्ट ।। त्यो कुरा खुब आनन्दित भएर आफ्नो केटी साथीलाई भन्छन् । आफ्नोमात्रै होइन साथीहरुको गोप्य कुरा पनि हमेसा श्रीमानसँग छुपाउने उनीहरुको प्रयास हुन्छ ।
श्रीमान वा प्रेमीलाई आफ्नो मेकअफ सिक्रेटबारे थाहा नहोस् भने प्रायको मनसाय हुन्छ । आफ्नो सुन्दरतासँग काफी सजग रहने भएकाले पनि महिलाहरु मेकअप सिक्रेटबारे जानकारी नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।
सर्भेमा सहभागी प्राय युवतीहरुले आफूले पूर्वप्रेमीप्रति आफ्नो भावना र उसँग जोडिएको कुन पनि कुरा पतिलाई थाहा नहोस् भन्ने चाहना रहने बताए । भूतको चक्करमा वर्तमानको खुसी नखोसियोस् भन्ने उनीहरुको मुख्य चिन्ता हुन्छ । तर, रोचक कुरा केही महिलाले भने जानबुझ नै आफ्नो पूरानो सम्बन्धबारे पतिलाई बताएर उसको उम्मिदको ग्राफमा कति परिवर्तन आउँछ भनेर जाँच्ने गरेको जवाफ दिए । यो अपवाद हो ।
भनिन्छ, महिलाहरुलाई माईती गाउँको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ । त्यसैले प्राय युवतीहरु आफ्नो घर तथा महिलाहरु माईतीबारे प्रेमीसँग निकै नै सजग भएर कुरा गर्छन् । आफ्नो परिवारको छविबारे कसैले कुनै प्रश्न उठाउन नपाओस् ।। साझापोस्ट ।। भन्ने उनीहरुको मनसाय हुन्छ । उनीहरु आफ्नो आमा र परिवारसँग जोडिएका हरबात गोप्य राख्न चाहन्छन् । पतिका अघि आफ्नो माईतीको इज्जतसँग उनीहरुलाई खुबै गर्व हुन्छ ।
यी हुन् पैसै-पैसा भएका बलिउड नायिकाहरु ! हेर्नुहोस् स्रवाधिक धनि ८ नायिका !
होलीमा प्रकाश र दीपकको ह’त्या’मा सं’लग्न अ’भियु’क्त सार्बजनिक